Nin ‘fal argagax leh’ geystay oo loo qalqaalinayo in deg deg lagu daldalo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nin ‘fal argagax leh’ geystay oo loo qalqaalinayo in deg deg lagu...
Nin ‘fal argagax leh’ geystay oo loo qalqaalinayo in deg deg lagu daldalo
Qoraalka sawirka,Ayeeyo 86 jir ah ayaa lagu kufsaday magaalada Delhi
Kumannaan kun oo kufsi ayaa sanad walba laga soo tabiyaa dalka Hindiya, laakiin falalkaas qaarkood waxay argagax weyn ku abuuraan qaranka oo dhan – cid walba oo maqashana way dhibsataa -marka loo eego dadka lagu bartilmaameedsaday.
Mid ka mid ah kiisaska sida weyn looga naxay ee kufsiga ah ayaa Isniintii ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Delhi. Nin da’diisa lagu qiyaasay 30-meeyo ayaa loo xidhay kufsi uu u geystay haweeney ayeeyo ah, oo jirta 86 sano.
“Haweeneydu waxay maqribnimadii Isniinta gurigeeda hortiisa ku sugeysay ninka caanaha iibiya markii uu u yimid ninka weerarka u geystay,” ayey tidhi Swati Maliwal, oo ah madaxa Golaha Haweenka ee magaalada Delhi, mar ay la hadleysay BBC-da.
“Wuxuu u sheegay in uusan imaaneynin ninkii sida joogtada ah caanaha u keeni jiray xaafadda, wuxuuna u ballan qaaday inuu geynayo meel ay caano ka heli karto.”
“Haweeneyda waayeelka ah way aamintay hadalkiisa, wayna raacday,” ayey tidhi Ms Maliwal, iyadoo intaas ku dartay inuu geeyay meel beer ah, halkaasna uu ku kufsaday.
“Wax badan ayey oysay iyadoo ka baryeysa inuu iska dhaafo. Waxay u sheegtay inay ayeeyadiis oo kale tahay. Laakiin wuu iska dhaga tiray baryadeeda, si naxariis darro ah ayuuna u kufsaday iyadoo isku dayeysa inay iska celiso,” ayey tidhi Ms Maliwal.
20 kun gabdhood oo lagu kufsaday dalka Hindiy
Dadkii xaafadda ee agagaarkaas marayay ayaa maqlay oohinteeda, wayna badbaadiyeen. Ninkii falka geystay waxay ku wareejiyeen booliska.
Ms Maliwal, oo Talaadadii booqatay haweeneyda dhibbanaha ah, ayaa la kulankeeda ku tilmaantay “qalbi-jab”.
“Gacmaheeda waxaa ka muuqda duqnimo aad ah. Waad argagaxeysaa marka aad maqashid waxa ku dhacay. Wajigeeda iyo jidhkeeda oo dhan waxaa ka muuqday xagtin, waxayna ii sheegtay inay ka dhiig baxeyso xubinta taranka. Waxay aad ula dhibaatooneysaa xanuun dhanka maskaxda kasoo gaadhay.”
In si deg deg ah loo daldalo ninka falka geystay
Qoraalka sawirka,Tacaddiyada ka dhanka ah haweenka Hindiya ayaa soo badanayay sannadihii dambe
Ms Maliwal ayaa dalbatay in xukun dil ah lagu rido ninka haweeneyda waayeelka ah kufsaday, kaasoo ay ku tilmaantay “in uusan bani’aadan ahay”.
“Waxaan warqad u qorayaa madaxa caddaaladda ee ka howl gala maxkamadda sare ee Delhi iyo duqa magaalada, anigoo ka codsanaya in la dardar galiyo dacwadda ninkan, laguna daldalo lix bilood gudahood,” ayey tidhi.
Falalka kufsiga iyo tacaddiyada dhinaca galmada ayaa aad ugu badanayay dalka Hindiya tan iyo bishii December ee sanadkii 2012-kii, markaasoo gabadhad ardayday ahayd, oo 23 jir ahayd lagu sameeyay kufsi wadareed, xilli ay saarnayed bas socday bartamaha magaalada Delhi.
Waxay dhaawacyadii weerarkaas kasoo gaadhay u geeriyootay dhowr maalmood kaddib. Afar ka mid ah raggii lagu eedeeyay dhacdadaas ayaa la daldalay bishii March ee sanadkan.
Laakiin iyadoo la xoojiyay howlgallada ka dhanka ah falalka kufsiga, sharci adagna loo sameeyay, wali waxaa sii badanaya tirada kiisaska kufsiga.
Sida laga soo xigtay waaxda qaran ee diiwaangalinta dambiyada, 33,977 kiis oo kufsi ah ayaa Hindiya ka dhacay sanadkii 2018-kii – taasina waxay ka dhigan tahay in dalkaas uu fal kufsi ah ka dhaco 15 daqiiqo oo kasta.
Hase yeeshee, dadka u ol’oleeya la dagaallanka tacaddiyadaas waxay sheegeen in tiradi ay aad uga badan tahay inta la sheegay, ayna jiraan kiisas ka badan kuwa la ogyahay oo aan lasoo tabinin.
Dhammaan falalkaas wararka laguma soo qaato, waxaa laga hadlaa oo kaliya kuwa sida arxan darrada ah loo geysto.
Maalmihii lasoo dhaafay, xilli ay Hindiya dadaal adag ugu jirto la dagaallanka fayraska corona, waxaa lasoo tabiyay in darawal kaxeeya gawaadhida gurmadka degdegga ah uu kufsaday haweeney ka mid ah bukaannada Covid-19, taasoo uu usii waday isbitaalka.
Qoraalka sawirka,Hindiya waxay sanadkii 2013-kii ansixisay sharci adag oo ka dhan ah dadka kufsiga geysta
Bishii lasoo dhaafayna, gabadh 13 jir ah ayaa la helay meydkeeda la helay iyadoo la kufsaday kaddibna la dilay. Aabbeheed wuxuu sheegay in labada indhood laga bixiyay, carrabkana laga jaray.
Sidoo kale bishii July, gabadh yar oo lix jir ah ayaa la afduubtay kaddibna la kufsaday, qofkii weerarka u geystayna wuxuu dhaawacyo halis ah gaadhsiiyay indhaheeda, si aysan u aqoonsanin isaga.
Sida ay sheegeyso Yogita Bhayana, oo u doodda xuquuqda haweenka, ma jirto da’ badbaadeysa.
“Waxaan la kulmay gabar hal bil kaliya jirta iyo dumar 60 dhaafay oo la kufsaday,” ayey tidhi Ms Bhayana.
Sanadkii 2013-kii baarlamaanka Hindiya wuxuu meel mariyay sharci adag oo lagu wajahayo tacaddiyada galmada.
Xigasho Bbcda qeybta Afka Soomaaliga
Previous articleDab xoogan oo markale ka kacay Dekada magaalada Beirut ee dalka Lubnaan.
Next articleWar deg deg ah Hugan madaafiicda oo Caawa laga maqlayo magaalada Muqdiaho
Taiwan ayaa wakiil cusub oo lagu magacaabo Lou Chen-hwa u magacowday...
Maamulka Galmudug oo war ka soo saaray Kulanka 8...